အမျိုးသားရေးတိုက်စစ်မှူးများ ကြေညာချက် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » အမျိုးသားရေးတိုက်စစ်မှူးများ ကြေညာချက်
Bdc Burma and3others shared Wira Thu‘s photo.
ပြည်တွင်းပြည်ပ အင်အားကြီးမီဒီယာတွေ ဘယ်လိုပဲ အနိုင်ကျင့်နေပါစေ၊ ပြည်သူတွေကတော့ ဓမ္မဘက်မှာပဲ ရပ်တည်နေလျက်ပါ။
ဒူးဝါး ခွန်မန်းနောင်နှင့် ဥပဒေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖွဲ့ဆိုတာကို အရင်က ကြားတောင် မကြားဖူးခဲ့ပါ။ ရှေ့နေများအဖွဲ့ဆိုတာတော့ သိထားပါတယ်။ သန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးအရေး ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ ရှေ့နေများကအဲဒီအဖွဲ့ထဲကပါ။ ဝီရသူရဲ့ ရှေ့တန်းတိုက်စ်မှူးတွေလို့ ခံယူထားတဲ့ရှေ့နေတွေပါ။
အံ့ကျော်က သရုပ်ဆောင်ကောင်းလေ ကျော်ဟိန်းကို ပြည်သူကချစ်လေပေါ့နော်……။
“DU WAAR KHUN MUNN NAING AND LAW ASSOCIATES”
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း(၈)ရက်
ခရစ်နှစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်။
၁။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ၏ မိန့်ကြားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ ပျံ့နှံ့လျှက် တုံ့ပြန်သံများ သောသောညံနေသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောထားကိုလည်း ထုတ်ပြန်ရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် (၂၃-၁၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောအရေးပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါ အတိုင်း သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါသည်။
၂။ ရှောင်ကြဉ်အပ်သော ဝစီကံ(၄)ပါး၌ အကျုံးဝင်ငြိစွန်းသည့် စကားရပ်များမှာ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့် အလွှာနှင့်မျှ မတင့်တယ်သည်ကို ဓမ္မအနေဖြင့် ရိုသေလေးစားစွာ လက်ခံပါသည်။
၃။ဤကိစ္စတွင်ဆရာတော်ဦးဝီရသူသည်အမျိုးသားရေးအမြင်နှင့် လေးနက်စွဲမြဲစေရန် လောကအနေဖြင့် မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အထွေထွေအရပ်ရပ်ကိစ္စများကို ယနေ့ ပစ္စက္ခအခြေအနေ၌ ပြည်သူတို့သည် အမျိုးသားရေးအမြင်၊ အမျိုးသားရေးအခြေခံ၍ စဉ်းစားခြင်းမှ ကင်းပြီး အခြားအခြေခံမရှိနိုင်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က မမှိတ်မသုန်စွဲမြဲစွာ ခံယူထားကြသည်။
၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို မည်သူ မည်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းက ပြစ်တင်ဝေဖန် သည်ဖြစ်စေ၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးကို ကြည်ညိုမှီခိုနေကြသူ ဒကာ၊ ဒကာမများဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒီများလည်းဖြစ်ကြကုန်သော ကျွနုပ်တို့သည် ဤကိစ္စရပ်တွင် မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူ၏ ရှေ့တန်းတိုက်စ်မှူးများအဖြစ် ခံယူရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Bdc Burma shared Wira Thu‘s photo.
Lin Min Oo likes this.
Tay Za Thura shared Wira Thu‘s photo.
Yesterday at 06:14 ·
Bdc Burma shared Ye Moe‘s photo.
30 January at 20:04 ·
Face Book ပေါ်မှာ ကောလဟာလများ မမှန်သတင်းများ ဒိုင်ခံဖြန့်နေသော စစ်တပ်ထဲမှ ရဲမိုးဆိုတဲ့ ကောင်ပုံ။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689254501187448&set=a.127107237402180.24229.100003087144846&type=1&theater
Ye Moe feeling ready
ကြာတော့ ကြာခဲ့ပြီ …
ဒီနေ့ မှ အခန်းရှင်းရင်းတွေ့ မိတဲ့ပုံလေး …
စစ်ရုံးထဲက ဇေယျာသီရိဗိမ္မာန်ရှေ့ မှာ …
Win Maw Shwethanzin and Zaw Win shared Thin Zarkhine‘s post.
Thin Zarkhine added9new photos — with Phyoe Phyoe Aung and3others.
၄ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပဲ စပါတောမယ်။ စိန်ရတုခန်းမထဲ ကျောင်းသားကိုယ်စားပြု (၁၅) ဦးကော်မတီဝင်သွားပါပြီ။ အားလုံးစောင့်ကြည့်ကြမယ်။
Win Maw Shwethanzin shared Thin Zarkhine‘s post.
Natshin Naung and5others like this.
Zaw Win shared Thin Zarkhine‘s post.
Pyinnya Zawta and 19 others like this.
Win Maw Shwethanzin shared Pinky Poekaung‘s post.
30 January at 10:42 ·
Pinky Poekaung with Win Maw Shwethanzin and 29 others
Natshin Naung, Mingalar Yone Lay, Minya Khin and 29 others like this.
Natshin Naung ထောက်ခံလျက်ပါကိုဝင်းမော်ရေ။
30 January at 10:58 · Like · 1
Aung NaingThu လက်ကိုင်တုတ်တချောင်းအတွက်နဲ့တော့ ဝါး အစည်းမပြေချင်
30 January at 12:23 · Like
Fwg Uas KEEP HATING
Yesterday at 01:18 · Like
Tags: Buddhist, Burma, burmese, Myanmar
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 01/02/2015 .
← အင်္ဂလန် မဘသ ရဲ့  Face Book စာမျက်နာပါ ။ ဆန္ဒရှိရင် လိုက်လိုရ အောင်ပါ ။	Myanmar: ကျောင်းသားသပိတ် အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးပြု အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း တာဝန်ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားပါ →